Krkonoše z výšky fotografie - Free free music themes market downloads
HomeblogKrkonoše site na elu nke foto ahụ
Krkonoše site na elu nke foto ahụ	Hapụ ikwu
Ndabere nke mejupụtara ihe banyere ala na-ejuputa elu nke elu nkume ma ọ bụ nkume ndị dị na nkume mbụ (mgbachi). N'ebe ọwụwa anyanwụ nke ugwu ugwu ahụ, ala ala anaghị adịkarị. Okpomọkụ crystallinic oge ochie abanye n'ime ebe ụfọdụ na Krkonoše-Jizerský pluton (granite). Mmiri ndị na-egbuke egbuke nke ebe ndị ahụ na-ekpo ọkụ bụ ndị na-egbukepụ egbukepụ nke na-egosipụta ala ime obodo. E nwere ụdị abụọ glaciers. Nke mbụ bụ ndagwurugwu-ụdị glaciers na nke abụọ bụ ụdị Scandinavian. Ugwu miri emi (obosara Ekwensu, wdg) na-ekpuchi ya site na ya. Maka echiche ka mma, anyị nwere ike ilele iceba na Scandinavia nke na-egosi otú ọ dị Giant Mountains nwere ike ile anya. Ihe nlereanya kachasị mma nke ọrụ glacial bụ, dịka ọmụmaatụ, Elbe Mine ma ọ bụ Giant Mine, nke bụ ndagwurugwu nke glaciers kpatara. Ndị ọzọ na-ekpo ọkụ glacial bụ ndị na-ekpuchi ọkụ (v Giant Mountains a maara "break"). Okwesiri ikwu banyere Kotelní damy na olulu Snow nke di na Poland. Kary bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ọnụ anyị nwere ike ime Giant Mountains n'ihi na ha bụ ugwu kachasị oke nke Oké Osimiri Ukwu. Ọrụ mkpuchi v Giant Mountains ọ dị mkpa ịkpọtụrụ, dịka ọmụmaatụ, oké nkume oké nkume (ugwu dị elu) ma ọ bụ ụlọ ndina oyi.
Krkonošský crest bụ ogologo na-amalite 35 km n'ebe ọdịda anyanwụ nke New World sadulu (888 m) na-agwụ na n'ebe ọwụwa anyanwụ ke sadulu Kralovecky (516 m). Ugwu elu n'elu ugwu dị elu ma daa na Poland na ugwu ugwu. N'akụkụ nke ọzọ, n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ, ndagwurugwu miri emi kewara ebe ugwu ahụ, nke dabara adaba karị. A na-ekewa Ugwu ukwu n'ugwu Giant, Ugwu Ukwu na Ugwu Ugwu Vrchlabi.
Oké Ugwu ahụ na-ekewa ọdịiche dị n'etiti Oké Osimiri Ugwu na Oké Osimiri Baltic. V Giant Mountains Osimiri Elbe, Malá Labe, Upa, Jizerka na Mumlava, nakwa Kamienica na Łomniczka. N'ebe ndị Poland, e nwere ọdọ mmiri glacier Wielki na Mały Staw. Na mpaghara Bohemia nke Krkonoše bụ isi mmiri nke Mechové.
N'elu ókèala ugwu ukwu dị iche iche, e nwere ụdị osisi na anụ ọhịa ndị na-akpata ọgwụgwụ. Na ugwu Krkonoše, ógbè kachasị dị n'elu n'elu oke ugwu dị na Czech Republic. Mgbe elu 1200-1300 m eriri ọhịa ahụ na-akwụsị ebe a. N'elu bụ ebe ala ọma jijiji ahụ, onye agha, nkume ahụ na oké osimiri ahụ. A na-akpọ biotope a na-ahụkarị arc-alpine tundra. N'ebe ụfọdụ, anyị na-ahụkwa peat bogs. A na-ebibi akụkụ nke mbụ ahụ site na mmetụta nke ntinye. N'akpuru ala, beech na spruce monocultures na eto. Na Malacofauna nke Ugwu Ukwu ahu nwere 90 umu mollusc.
← ike ike Rock
Rokytnice nad Jizerou site na elu nke foto ahụ →